Kullan Sannadeedka Xisbiga Doogga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gustav Fridolin.Sawirle: Erik Holmlund, P4 Skaraborg.
Kullan Sannadeedka Xisbiga Doogga
Uppdaterat fredag 20 maj 2011 kl 13.50
Publicerat fredag 20 maj 2011 kl 09.38
Dhabbadee ayuu dooran doonaa xisbiga Dooggu kadib kolkii uu burburay gaashaan-buureeysigii xisbiyada ey xulufada ahaayeen ee Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Bidixda, iyadoona uu kulan-sannadeed xisbigu yeelan doono lagu dooran doono hogaamiyeyaasha cusub ee xisbiga?
Gustav Fridloin ayaa lagu wadaa inuu noqon doono mid ka mid ah labada hogaamiye ee xisbiga loo dooran doono kulanka uu ku yeelan doono magaalada Karlstad maalinta berito ah ee sabtida. Fridolin ayaa u arka mustaqbalka xisbiga sidan.
- Xaqiiqdii waxaan dhexda uga jirnaa sidii aan ku noqon lahayn xisbi hogaanka ama maamulka dalka qaadi kara. Waxaan ku jirnaa is-bedel aad u ballaaran ee la mid ah kii lagu magacaabi jiray ”Folkhemmet” – dhismihii daarta bulshada.
Xisbiga Doogga ayaa ku socda sidii uu ku ballaarin lahaa xoogagga bulshada taageersan, sida uu aaminsan yahay Gustav Fridolin.
Iyadoona dhabbada uu xisbigaasi qaadi doono ay ku xiran tahay hadba cidda kale ee loo doorto kursiga labaad ee hoggaanka xisbiga, ma waxay noqon doontaa Åsa Romson, mise Mikaela Valtersson. Sidaa waxaa qabta caalimadda la yiraahdo Jenny Madestam oo ka howl-gasha jaamicadda Istockholm, islamarkaan u muuqato in xisbiga taageeradiisu kor u sii kici karto.
- Xisbiga Dooggu wuxuu ka gudbay aragtidii horay looga haystey inuu yahay xisbi su’aal keliya ku dhisan (cimilada) noqdayna xisbi ey asxaabta kale qiimeeyaan, islamarkaana la tirsado oo wadahadal iyo heshiisyo lala galo.
Xisbiga Doogga ayaa codad badan ka helay magaalooyinka waaweyn. Iyadoona uu doorashadii ugu dambeeysay ee sannadkii 2010 uu magaalada Istockholm ee caasimadda dalka saami u helay 12% dadkii codkooda dhiibtay, halka uu magaalada Gothenburg ku guuleeystay codad gaarsiisan 10 boqolkii.
Bulshada magaalooyinka ee u codeeysey xisbiga ayaa ah mutacalimiinta magaalooyinka ku dhaqan, waana halka ceelashu uga soo burqan karaan eyna jiraan dadyoow badan liberaaliya cimiladuna qiime la leedahay, sida ay qabto Jenny Madestam.